July 5, 2021 887
असार ११ गते साथीको घर जान्छु भनेर गएकि सुजिताको श’व झा’डिमा फेला परेको छ। २० आषाढ । केहि दिन अगाडी कि’ड्न्या’प भएकी भनिएकी राप्ती नगरपालिका वडा नं. ३ की सुजिता भण्डारीको ला’स फेला परेको छ ।
वडा नं. ३ को धमिलीमा रहेको बम्हस्थानि सामुदायिक वनमा भण्डारीको ला’स फे’ला परेको हो । उनका परिवारका सदस्यले लासको पहिचान गरेपछि भण्डारीको ला’स रहेको भन्ने प्रमाण भएको हो । आज दिउसो प्र’हरीले त्यहा ला’स रहेको जानकारी पाएपछि टोलि लिएर सो स्थानमा पुगेको थियो ।
आमासंगको कुराकानी असार महिना सुरु भए लगत्तै धान रोप्ने सिजन पनि सुरु भएको थियो। त्यस दिन सुजिताको घर मा पनि धान रोप्ने दिन थियो। तरकारी किन्न जान्छु भनि घरबाट निस्कि`एकी सुजिता बिच बाटोबाटै उनि अ’प’हरण परिन। कसले गर्यो ,किन गर्यो ,के का लागि गर्यो त्यो कसैलाई थाहा छैन। घरमा छोरि कहाँ गईछ भनि बुबा आमाले धेरै बेर बाटो कुरेर बसे तर छोरि घर आइनन।
उनलाई फोन गर्दा पनि फोन नै लागेन। घरमा बुबाआमालाई पि’र पर्न थाल्यो ,हुर्के बढेकी छोरि एकाएक हराउदा। गाउघर ,प्रसासन सबै ठाउ मा खबर गर्दा पनि केहि थाहा भएन। दिउसो दिदीलाई फोन गरेर दिदि म अ’प’हरण मा परेको छु ,मलाई चोकदेखि गाडीमा हाले ,मलाई टा’उकोमा हा’नि रहेका छन् ,आखा बा”धिदिएका छन् भनि बहिनीको नम्बर बाट दिदीलाई फोन आयो र का’टीए पछि फोन नै नलाग्ने भयो ।
Prevआज सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? यस्तो छ मूल्य
Nextयी युवतीको कारण ४२ वर्ष बन्द रह्यो भारतको यो रेल स्टेसन (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134617)